अनि कसरी खेलिँदैछ बहुमत र अल्पमतको खेल ? « Sansar News
अनि कसरी खेलिँदैछ बहुमत र अल्पमतको खेल ?
१४ असार २०७७, आईतवार १४:४९
जनताले दुई तिहाई दिएको देश र जनताको सेवामा बामपन्थीहरु नि:स्वार्थ खटनेछन भनेर नै हो । तर आज तपाईंहरु आ–आफ्नै खेल र खेलबाड र दम्भ घमण्ड कुन्ठमा एक अर्कोप्रति आरोप प्रति आरोप कति जायज छ ।
आदरणीय नेतागणहरु अहिले विश्व कोरोनाको माहामरीको आक्रान्तमा छ । देशमा दिन प्रतिदिन जनतामा कोरोना संक्रमण बढीरहेकै छ । यस बेला सरकार पार्टी पक्ष प्रतिपक्ष सबै मिलेर त्यसलाई रोक्न एकताबद्ध बनेर अगाडी बढनुको साटो एक अर्कोप्रति कुन्ठा पालेर छिर्के दाउ हान्नेमा देखिनु कति जायज छ ? देश र जनताका बिषयहरु अहिले पनि सबै राजनीतिक पार्टीहरुका प्रतिनिधिहरु र देशका बिज्ञहरुलाई एकठाउमा उपस्थिति बनाएर वा पार्टी भित्र छलफल गरेर ती बिषयहरुलाई हल गर्ने सक्ने दक्षता क्षमता हाम्रो आदरणीय नेतागणहरुमा छ । तर त्यसो नगरेर एकले अर्कोलाई कसरी पछार्ने सकिन्छ ? गल्ती भेटाउन सकिन्छ भनेर कोठे भेला गरेर अनि विदेशी सन्जालमा शत्रु हँसाएर के नेपाल र नेपाली को हितमा छ ? के एकताको प्रक्रिया त्यसैको लागि गरिएको हो र ? हरेक देश बिदेशका नेपालीहरुले देशका हरेक घटना प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालीरहेका छन ।
भ्रष्टाचारको बिषयमा आज खुलेआम छलफल बहस गर्ने गराउन सक्नु गल्ती कम्जोरी गर्नेहरुलाई आज समझदर मन्त्रीबाटै हटाउन सक्नु र भ्रष्टाचारको बिषयमा संसदीय समितिमा छलफल बहस हुनु देश र जन्ताकै पक्षमा हैनन र ? के यी सब काम गरेबापत आज प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा देउ भन्न सक्ने हिम्मत कसरी आउछ ? अनि वर्तमान अवस्थामा पार्टी र सरकार सहमति र सहकार्यमा गरेर जाने बिधानमा उल्लेख छ । अनि कसरी बहुमत र अल्पमतको खेल खेलिदैछ ? के यी सब बिषयमा कोहि जानकार छैनौ र ? त्यस कारण पुन हाम्रो अनुरोध छ ।
पार्टीको एकता प्रक्रियालाई अगाडी बढाएर महाधिबेशनमा सिङ्गो पार्टी अगाडी बढन ढिलाइ नगरेको भए अझ पनि नगर्ने हो भने अहिले उठेका हरेक बिषयको किनारा लगाउन सफल भईन्थ्यौ नै खै । त्यता ध्यान दिएको को कति सतहमा को को छौ भन्ने कुरा आम कार्यकर्ताले फैसला गर्ने थियो नै तर आज आफै भित्रबाट केही एकता महिनाको लागी मात्रै भएपनि आफ्नै मानिस खोज्दा आज सबैमा एकता प्रक्रिया नै गलत रहेको निस्कर्ष निकाल्नु खोज्नु र पद लेनदेनमा पछि हटेकोमा पछुतो आउने बनाएको के कार्यकर्ताले हो । पक्कै पनि हैन त्यसकारण अहिले समय आएको छ सबै मिलेर पार्टीका एकता प्रक्रिया र महाधिबेशनलाई केन्द्रीकृत बनाउनु होस । सरकारमा रहेकाले पनि राम्रो समीक्षा गर्नु होस कहाँ कहाँ कमजोरी भएका छन तिनीहरु खोज्नु होस । पार्टीमा रहेकाहरुले आ-आफ्नो जिम्मा भुमिका निभाउन किन सक्नुभएन समीक्षा गर्नुहोस । पार्टी संगठन एकता प्रक्रियामा जिम्मेवार बनेका संगठन बिभाग प्रमुखले के कति कार्य सम्पन्न गर्नु भो सबैलाई अबगत छ । ती सम्पुर्ण बिषयहरुको समीक्षासहित अगाडी आउनुहोस नकि सरकारमा जानलाई र सरकारको बिरोध गरेर आफु पानी माथिको ओभानो बन्ने कुरामा सबैले बुझ्नेछन ।
हामी र हाम्रो लागि सबै बराबरी किनकी हामी प्रवासमा आफ्नै मेहेनत र पसिना बेचेर दुई छाक साझ बिहान काटी रहेका छौ । नत हामी जागीर मागीरहेका छौ नत हामी तपाईंहरुकै नजिक बनेर कुनै सेवा सुबिधा लिएका छौ । हामी र हाम्रो कामना जनताले दुई तिहाई दिएको देश र जनताको सेवामा बामपन्थीहरु नि:स्वार्थ खटनेछन भनेर नै हो । तर आज तपाईंहरु आ–आफ्नै खेल र खेलबाड र दम्भ घमण्ड कुन्ठमा एक अर्कोप्रति आरोप प्रति आरोप कति जायज छ । देश र जनताले बिकाशको फडको मारे भोलिका सन्तानले प्रवासका भूमिमा भौतरिन नपरोस् दुःख कस्ट झेल्नु नपरोस हामी जे जति अपमान दुःख कस्ट सहेका छौ र सहन परेको छ । भोलिको सन्ततीले सहन नपरोस भन्ने कामनाले नै निर्वाचनको बेला लाखौ लाख प्रवासीहरुले आफ्नै खर्चमा नेपालमा एक मना सरकार बनोस् भनेर समर्थनसहित प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको इतिहासलाई नभुल्नुहोस। हामी र हाम्रो चाहाना देशले बिकाशमा फड्को मारोस भन्ने नै हो र थियो र अझै छ ।
जसले जसरी बुझोस तर दुनिया सन्सार लाई अवगत छ । छिमेकीले नाकाबन्दी गर्दा शिर ठाडो बनाउने काम के.पी ओलीबाट भएको कुरा लुकाएर लुक्दैन । २०७४ सालको स्थानिय निर्वाचनमा अभुतपूर्व बिजय के.पी ओलीको पहलमा भएको र त्यहि बिजयले बामपन्थी एकताको लागि बाटो तय भएको कुरा कहिले लुकेको छैन । त्यहि एकताले प्रदेश र केन्द्रीय सरकार बनाउन लगभग दुई तिहाईसम्म कै सरकार नजिक बन्न पुग्नु र त्यहि जनताको अपार मायाले पार्टीको एकता भएको कसैले भुलेका छैनन । सरकार बनेपछि देश र जनताको पक्षमा कमि कम्जोरीसहित राम्रो कामहरु भएकै छन् । विधि बिधान स्थानिय नियमाबली कानुन कर्मचारीको व्यवस्थापनहरु जस्तै : आफ्नो अरुले हडपेको जमिन हाम्रो हो भन्ने साहस देखाउनु । दुई बर्षे भन्दा बडी संसदमामा अल्झीएको नागरिक विधेयक देश र जनताको पक्षमा निर्णय गर्न सक्नु । एउटा देशको निर्भरमा रहेको देशलाई विश्वका छिमेकी मुलुकहरुसगको सम्बन्ध व्यापार पारवहान सन्धि सम्झौता गर्ने गराउन सक्नु के यी देशका हितमा हैनन र ? यी बिषयमा बिगतमा थुप्रै सरकार बनेका थिए कसैले शाहस गरेका थिए र ? भ्रष्टाचारको बिषयमा आज खुलेआम छलफल बहस गर्ने गराउन सक्नु गल्ती कम्जोरी गर्नेहरुलाई आज समझदर मन्त्रीबाटै हटाउन सक्नु र भ्रष्टाचारको बिषयमा संसदीय समितिमा छलफल बहस हुनु देश र जन्ताकै पक्षमा हैनन र ? के यी सब काम गरेबापत आज प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा देउ भन्न सक्ने हिम्मत कसरी आउछ ? अनि वर्तमान अवस्थामा पार्टी र सरकार सहमति र सहकार्यमा गरेर जाने बिधानमा उल्लेख छ । अनि कसरी बहुमत र अल्पमतको खेल खेलिदैछ ? के यी सब बिषयमा कोहि जानकार छैनौ र ? त्यस कारण पुन हाम्रो अनुरोध छ ।
सरकारका कमि कम्जोरी छन् तिनीहरुलाई किटानसहित हटाउने प्रयास गरियोस र प्रधानमन्त्रीले केहि सिमीत व्यक्तिहरुका राय सल्लाहमा हैन आम जनताले देख्नेगरि आफ्नै दौतारी र बिगतमा पार्टी र सरकारको भूमिका निभाएका नेताहरुप्रति विश्वासमा लिएर कमिकम्जोरीको समीक्षासहित अझ देश र जनताको लागि राजनेता बन्नेमा आफूलाई खडा गर्नुहोस । पार्टीका कार्यबाहाक प्रचण्डज्यू तपाईले ठूलो त्याग र हजारौ हजारको बलिदानबाट मुक्त पाउन र ती सहिदहरुको सपना पुरा गर्ने सबै पक्ष प्रतिपक्ष र आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई एकता बनाएर बर्तमानमा उठेका थुप्रै बिषयमा सहमति समझदारी बनाई आफु र पार्टीलाई एक बनाउन लाग्नुहोस । अबको भाबि नेता बन्ने प्रयास गर्नुहोस् नकि केही नेताहरुका कुन्ठमा साथ दिएर अलग कोठे भेला गरेर सफल भइँदैन यसमा सोच्नुहोस। तपाईंको सघर्ष त्याग साहासलाई कसैको उक्साहटमा बिलय नबनाउनु होस ।